ဘယ်သူဆွတ်ခူးသွားသလဲ….Best Web Awards | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Best Web Awards » ဘယ်သူဆွတ်ခူးသွားသလဲ….Best Web Awards
ဘယ်သူဆွတ်ခူးသွားသလဲ….Best Web Awards
Posted by အရင်ကကျော်စွာဦးကြီးမိုက် on Jan 7, 2015 in Best Web Awards, Creative Writing, My Dear Diary, Myanmar Gazette | 31 comments
မန်းဂဇက်ချစ်သူများစာပေဆု (နိုဝင်ဘာ+ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၄) ဆုရပို့စ်လေး
ရွာသူားတွေ တွေးကြည့်ဖို့ စကားစုလက်ဆောင်လေးပေးပါရစေအုံးဗျာ…..
ထုံးစံအတိုင်း ကျုပ်ပြန် ဖတ်နေတဲ့ ဆရာသက်လုံဘာသာပြန်တဲ့ စေ့ထားသောတံခါးများ
စာအုပ်ထဲက..“တောက်တယ်ကျင်း” ရဲ့ ၄၈ ပုဒ်မြောက်စာပိုဒ်ကလေးပါ…
ပညာရှိ၏ စိတ်အာရုံသည် လွတ်လပ်၏။
သို့သော် လူတို့၏အကျိုးသို့ ညွတ်သည်။
တစ်သားတည်းပင် ငါသည်ရိုးသားမှုကို ဆောင်နှင်းသည်။
အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် ပညာရှိသည် ကြားရာမြင်ရာ၌ကား
အခုတော့ … မန်းဂဇက်ချစ်သူများစာပေဆု (နိုဝင်ဘာ+ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၄) ဆုရပို့စ်လေးကိုကြေငြာ
ပေးပါ့မယ်….မကြာခဏ ဆိုသလို ဆန်ခါတင်ပို့စ်တွေမှာပါလေ့ရှိပြီး
နှစ်အပိတ်မှ..သူ ရသွားတာ ၀မ်းသာဂုဏ်ယူမိပါတယ်…
သူဟာ…ဒီတစ်ခါတော့ သဂျီးတောင် လက်ဖျားခါသွားရတဲ့သူပါပဲ…..
နိုင်ငံရေးနဲ့ ဘာသာရေးကို အထူးလေ့လာလိုက်စားသော်လည်း
ဆြာမဂျီးနှစ်ဦးဖြစ်တဲ့…မြစပဲရိုး( ခေါ်) အရီးမုတ်ဆိတ် နဲ့ ၀င့်ပြုံးမြင့်(ခေါ် ) ဒေါ်မျှစ်ကြော် တို့က အပီ
မန်းဂဇက်ချစ်သူများစာပေဆု (နိုဝင်ဘာ+ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၄) ဆုရပို့စ်လေးကြေငြာပြီးသွားတော့
အခုလာမဲ့ ၂၀၁၅ ဇန္န၀ါရီလ (၁၁)ရက်၊ တနင်္ဂနွေနေ့မှာ ကျင်းပမဲ့ တွေ့ဆုံပွဲနဲ့ ဆုပေးပွဲကြီးကို
အောက်ပါပုဂ္ဂိုလ်များကို ဂုဏ်ပြုဆုချီးမြှင့်ရင်း ပျော်ရွှင်ကြည်နူးစွာတွေ့ဆုံကြပါစို့လို့…
၇၊ ၁၊ ၂၀၁၅
ဒီလူကြီးတစ်သက်လုံးရေးချင်တာတွေ လျှောက်ရေးလာတာ ရသင့်တယ်ထင်တယ်၊ သူနဲ့ ရှလူးဖက် ဘွပုတစ်ယောက်လဲ ရှိတယ်ဆိုရင်တော့ ရွေးကျန်အနေနဲ့ ရဦးမှာ
သတင်းသဲ့သဲ့ ကြားထားတာ ဒီဆုကို ကိုယ်တိုင်တက်ယူမှ ပေးမယ်ဆိုလားပဲ
:mrgreenn: :mrgreenn: :mrgreenn:
.ကိုယ်တိုင်တော့ တက်မယူလောက်ပါဘုလေ…ဖွဘုတ်မှာတောင် သူ့ပုံမပြပဲနဲ့ :mrgreenn: :mrgreenn: :mrgreenn:
​ရောက်​​နေတယ်​ သတင်းကြားလို့ ကိုယ်​တိုက်​ တက်​​ရောက်​​စေချင်​ပါတယ်​။ ​တွေ့ဖူးချင်​သူ​တွေ စာရင်းမှာ ဦး​ကြောင်​က ထိပ်​ဆုံး။
စကား အတင်းစပ်​ ဦးမိုက်​ရဲ့ မစပ်​​သော ငရုပ်​ ဆိုတာ​လေးကို ဖတ်​မိတိုင်း မစန်​ဒါရဲ့ အင်​ဂျင်​နီယာက ငါးဒိုင်​ဖွင့်​ ငါး​ရောင်း​နေတာကို ​ပြေး​ပြေးပြီး မြင်​​နေတယ်​။
ပေါ်လဆီ ကြောင်ယီးလဲ အပျောင်အပျက်တွေနဲ့ စုမရသင့်ဘာဝူး
ဘားမှမရေးတဲ့သူတွေကျဒေါ့ ဘားမှမရဝူး ဟွန်းးး
တစ်ဗုဒ်မှ မရေးတာလေးပဲ အပြစ်ချိတာ… ရသင့်တာပေါ့
.2015 နှစ်သစ်မှာတော့ ထူးပါလိမ့်မယ်…Wow နဲ့ Char Toolan ရေ
.ရွာအရောက်အပေါက်နဲပြီး စာမရေးတဲ့လူတွေကို ရွေးပီးဆုပေးအုံးမှာ
.ရွာသူတွေထဲက အကိတ်ကြီးတွေလည်း ပြိုင်ပွဲလုပ်ပြီးဆုပေးအုံးမှာ
ကလားဆိုက်မှ ပေးအပ်သော မာမွတ် ဂဇွတ် ဆုကို
မာမွတ် ဒေါင်ချူးအောင်အောင်ကြူးက ရရှိသွားပါသဖျင့်
မြားဇွာ ဂုံယူ ဝမ်းမျောက်ပါဂျောင်းးးး
အဲ့ဒီဆုရ ပိုစ့်ကို ရှဲဒိုးကြီး… လို့ သမ်သယ ရှိပါကြောင်း
ဒါကြောင့် ဦးကြောင် ကိုယ်တိုင် ရေးထားကြောင်း သပ်သေပြတဲ့အနေနဲ့
ဦးကြောင်ကိုယ်တိုင် တွေ့ဆုံ ဆုပေးပွဲကို ဆု လာယူပြီး
.ပြသပါမှ ရှဲဒိုး မဟုတ်ကြောင်း ယုံပါမည်။
ကားလားဆိုဒ်ဂို… အူရားဒူဂျီးသုံးးးဘီး… ၀င်းယေးတဲ့.. အူးကြောင်းဂျီး.. ယန်းဂုံးယောက်နေဘီး… တွေးဇုံးဘွဲမားတက်ရင်…
အဲ…. ဂဇက်လိခ် ဟ
ဘာဘီကျူ လုပ်မယ့်သူများအတွက် သတင်းထူးတွေ
၂၀၁၄ ကို ကြောင် နဲ့ အဆုံးသတ်ပါပေါ့။
တစ်ခုဘဲတွေးနေမိတယ် ကလားဆိုဒ်ဆိုပြီး ပြသနာရှာရှာနေလို့ ကြောက်လို့ပေးလိုက်တာတော့ ဟုတ်ပါဘူးနော်။
ရန်ကုန်ရောက်ပြီး ဆုလာမယူလို့ကတော့ အဲဒီ ကြောင်ကို Friend ပြန်မလုပ်တော့ဘူး။
(တခါတုံးက အပြင်မှာ မန်းဂဇက်က မပဒုမ္မာ ဟုတ်ပါတယ်နော်လို့ လာနှုတ်ဆက်ပြီး သူ့အကြိုက်ဆုံးက မိုက်ကယ်ဂျော်နီအောင်ပုပါလို့ ပြောသွားတဲ့ အမျိုးသမီးကို သတိရမိတယ်။ သူက ကြောင်ကြီးကိုလည်း ကြိုက်တယ်တဲ့။စာကိုပြောတာ။)
ဒီတစ်ခါတော့ ကြောင်စိတ်ပုတ် ရ တော့မယ် ထင်တာ မလွဲတော့ဘူး။
ကျေးဇူးတင်စကား ကို ကောင်းကောင်း မပြောဘူးလို့ မျှော်လင့်ထားပါကြောင်း။
ကြောင် တစ်ကောင် ရဲ့ ရင်ခုံသံ က စိတ်ဝင်စားစရာဘဲ။
Many Congratulations Mr Big Cat ! :))
အူးကျောင်ဂျီး မြန်တျန့် ကကိုးနတ်ရှင်နဲ့ ရွာဝင်မရလို့ ဖွဘုတ်တော်ဂျီးမှာ လာမန့်သွားပါတယ်…ကူးပီးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်
အသိအမှတ်ပြုတဲ့အတွက် အူးကျောင် ဂိုလည်း ဖက်ယွေးအဖွက်ကျီး မှ ကျေးဇူးတင်ပါဂျောင်းးး
.U Kyaung Gyi feeling thankful
မာမွတ်လျှာပွတ်စိုက်မှာ စူးယဒဲ့တွက် ဝက်သားပါဒယ်။ ဖက်ယွေးအဖွက်ကျီး အခုမှ ဟုတ်သလိုလို ယှိသွားဒါကုလား။ နောင်ကိုယ်လှီး စပ်သိဓါတ်မဲလို့ ရူးစပါတယ်။ ရှေ့စက်ပီးဒေါ့လှီး စုပေါင်း ၇၈၆ဆုတိတိ ယရူသွားဗာမြည်။ အနော့်ပေးမျိ လာဘ်စောင်ကို ဂေဇက်တွေ့ဆုံပွဲမှာ သာမီးလေးတွေအတွက် (သာမီးလေးမြှားသာ) ကံဆမ်းမဲ ဖောက်ပေးဇေလိုဘာသီ။ ကမ်ထူးယှဉ် သာမီးလေးအား ကြောင်ကြီးဆားပါမြီ။ ဦးမာမုကိုလည်းပေါပေးဘာ…. ဦးရီဒူးဂ မြန်တျန့်ဓဗျီဒဲ ရှိဒါမှုတ်လို့….
ဤစာဖက်မိသူ ဃေဇပ်အက်ဒ်မင်တဦးဦး ကျေဇူးပုပီး ဆုယွေးချယ်ဒဲ့ပို့စ် ကွန်းမန့်မှာ ဖင်ပေးဘာခမြှား။
မာမွတ်လျှာပွတ်ဆိုဒ်မှာ ဆုရတဲ့အတွက် ၀မ်းသာပါတယ်…။ ဖတ်ရွေးအဖွဲ့ကြီး အခုမှ ဟုတ်သလိုလို ရှိသွားတာကလား…။ နောင်ကိုလဲ ထပ်သိတတ်မယ်လို့ ယူဆပါတယ်..။ ရှေ့ဆက်ပြီးတော့လဲ ဆုပေါင်း ၇၈၆ဆုတိတိ ရယူသွားပါမည်..။ ကျနော့ပေးမည့် လက်ဆောင်ကို ဂေဇက်တွေ့ဆုံပွဲမှာ သမီးလေးတွေအတွက် (သမီးလေးများသာ) ကံစမ်းမဲ ဖောက်ပေးစေလိုပါသည်။ ကံထူးရှင် သမီးလေးအား ကြောင်ကြီး စားပါမည်..။ ဦးမာမုကိုလဲ ပြောပေးပါ..။ အော်ရီဒူးက မြန်မာပြန်တပြည်ပဲ ရှိတာမဟုတ်လို့…
ဤစာဖက်မိသူ ဂေဇက်အက်မင်တဦးဦး ကျေးဇူးပြုပြီး ဆုရွေးချယ်တဲ့ပိုစ့် ကွန်မန့်မှာ တင်ပေးပါခင်ဗျား
(ဇဂါးမစပ်) သာမီးလေးမြှားသာ ရှိုဒဲ့နေရာမှာ…ကောင်းကင်ပြာတော့ သာမီးလေးမဟုတ်တော့ပါ။ ၂၈ ရှိနေဘီမို့ သာမီးဂျီးဖစ်သွားဘီ ဖစ်ပါသောဂျောင့်…အူးကြောင်အိ ကံဆမ်းမဲအား…၀င်နှိုက်မြီ မဟုတ်ဘာဂျောင်း..
ကြောင်ရီးတို့ ဇာတာတက်နေတာ.. ဒီကေဘီအေသဗုန်က စကားပြန်လုပ်ပေးရဒယ်
ဆုရပိုစ့်အတွက် ကွန်မန့်ကိုတောင် ခေါင်းမူးအောင်ရေးနိုင်တဲ့ အူးကြောင်ကြီး…
ဒီတစ်ခါတော့ ဦးကြောင်ကြီး… ၂၀၁၄ မှာ လူဖြစ်လာ အဲ ဆုရလာပေါ့….
ဗရာဗိုပါ ဆုရသူများအားလုံးအတွက် ဂုဏ်ယူမိပါတယ်ရှင်….
မနောတို့တော့ စာပေကောင်းတွေကို နှစ် တစ်နှစ်ပြီး တစ်နှစ် ဆက်လက်ဖတ်ဖို့ စောင့်မျှော်နေပါတယ်လို့ ဒီနေရာကနေ ပြောကြားလိုက်ရပါတော့တယ်။
အု​ကျောင်​ဂျီးဂ ပို့ ဒိုင်း စုယသင်​ဒါ ။ ဂျုပ်​သာ သိမ်း​ထောငါ့ငါးရာ​ပေါက်​ကျိပါရား ။ အပုတ်​ဒိုင်း စု​ပေမာ ။ ထုမ ဖတ်​ရွှီး အဖွတ်​မျက်​စိလယ်​သွားရို့ ရှိမာ ဂျ
ဆုပိုင်ရှင် ကြောင်ကြီးကိုလည်း ဗရာဗိုပါ။
(လူမဟုတ်ပဲ ကြောင်ရတာတော့ ပြောချင်စရာ)
ဆုရွေးပေးကြတဲ့ ဖတ်ရွေးအဖွဲ့ကိုလည်း ဗရာဗိုပါ။
အစစအရာရာ တာဝန်ယူပြီးမြောက်အောင် ကြိုးစားပေးတဲ့ ဥက္ကဌကြီးမိုက်ုကိုလည်း ဗရာဗိုပါ။
သမီးတောင်းလိုက် အမေတောင်းလိုက်လုပ်နေတဲ့ ဆုရှင်အူးကြောင်ကို တွေ့ချင်ပါတယ်ဗျို့
ပထမအီခြက်​ဂ ဥ​ကျောင်​ယီးဂ စာလုံး​ဗောင်း​ဒေ မှန်​​အောင်​မ​ယေးဒါမို့ဘာ့း
ဘိရုမာ စာ​ပေသဓာ ပြက်​စီးသွားမယ်​ဆိုရင်​ ဖတ်​​ယွေးအဖွဲ့ကြီး အုတ်​ကျင်းတယားခံ ဖယစ်​ပါလိမ့်​မဲ့ယ့်​
ဒုဒိရ အီချက်​က ကိုကိုဝီတို့ကို သမထားတဲ့ပို့စ့်​ ဖစ်​လို့ဘာဘဲ့ယ့်​
ဓာဟာ မာမူးစ့်​ခါအီ ဆိုက်​ဒ်​ကို ​ကွေး​ချောက်​​ကွေး ဟက်​ခါ ​ဒေ မြက်​စိကျစရာ အန်​ဒလယ်​​တေကို ဖိတ်​​ခေါ်​နေသလို ​ဖျော်​ရကစ်​​နေတာ​ဂျောင့်​ဘာဘဲ့ယ့်​
အာ့ဆို အစားသောင်းကျန်း သိန်းကျန်း ကဋေကျန်းတဲ့ ကြောင်ဇိုးမဂျီးပေါ့ ဟက်လား
ဟုတ်မှာ ဟိုတလောက သုမှာ ကိုယ်ဝင်းကြည် ရှိနေပြီလို့တောင် ဖွင့်ဟ ဝန်ခံသွားသေးတယ် ဆိုတော့
ဗိုက်ဖုံး အင်းဂျီ ဒဂါးဂါး
ကြောင် နှုတ်ခမ်းမွှေးတများများနဲ့ လာလေမလားးး
စဉ်းစားရ ကျပ်ပါတယ် အုကြောင် အဲ ဒေါ်ကြောင် ရယါ
အမှန်တော့ ဦးကြောင်လို့သာ ခေါ်နေရတာ
အဲ့ ဟက်ကာဒွီဂို ကျောက် ရယ်ပေါ့လေ။ lol:-)))))
ဦးကြောင်ကြီးဆိုတာ ဒဂဲ့အပြင်မှာ မိန်းမယီးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးး ဒေါ်ကြောင်ကြီးဘာ………..
မှား ပီး ရီပလိုင်းမိတယ်ဟ
ဟို အပေါ်က ကွန်မန်း ချာတူးဂွမ်ကို ရီပလိုင်းတာ မှတ်ပါလေ
ဆုပေးပွဲမှာသူပြောချင်တဲ့စကားကတော့ သာမီးလေးတွေကို ဆားချဉ်သယ်ဆိုဘဲ